Yohane 16 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
16 “Maka eyinom akyerɛ mo na biribi anto mo hintidua.+ 2 Nkurɔfo betu mo afi hyiadan mu.+ Nokwasɛm ni, dɔn no reba a obiara a obekum mo no besusuw sɛ ɔde resom Onyankopɔn.+ 3 Nanso wɔbɛyɛ eyinom efisɛ wonnim Agya no anaa me.+ 4 Na maka eyinom akyerɛ mo na sɛ dɔn no du a, moakae sɛ meka kyerɛɛ mo.+ “Na mfiase no manka eyinom ankyerɛ mo, efisɛ na mewɔ mo nkyɛn. 5 Na afei merekɔ nea ɔsomaa me no nkyɛn,+ nanso mo mu biako mpo mmisaa me sɛ, ‘Ɛhe na worekɔ?’ 6 Na esiane sɛ maka eyinom akyerɛ mo nti, awerɛhow+ ahyɛ mo koma mã. 7 Nanso mereka nokware akyerɛ mo sɛ, eye ma mo sɛ merekɔ. Na sɛ mankɔ a, ɔboafo+ no remma mo nkyɛn da; na sɛ mekɔ a, mɛsoma no aba mo nkyɛn. 8 Na sɛ ɔba a, ɔbɛma wiase no adanse a edi mũ afa bɔne ne trenee ne atemmu ho:+ 9 nea edi kan no, ɛfa bɔne ho,+ efisɛ wonni me mu gyidi;+ 10 afei ɛfa trenee ho,+ efisɛ merekɔ Agya no nkyɛn na morenhu me bio; 11 afei ɛfa atemmu ho,+ efisɛ wɔabu wiase sodifo no atɛn.+ 12 “Mewɔ nsɛm pii ka kyerɛ mo, nanso morentumi nsoa seesei.+ 13 Nanso sɛ ɔno, nokware no honhom no,+ ba a, ɔbɛkyerɛ mo kwan akɔ nokware no nyinaa mu, efisɛ ɔremmɔ ne tirim nkasa na mmom nsɛm a ɔte no na ɔbɛka, na ɔbɛpae mu aka nea ɛreba akyerɛ mo.+ 14 Ɔno na ɔbɛhyɛ me anuonyam,+ efisɛ obegye nea ɛyɛ me dea no bi na wapae mu aka akyerɛ mo.+ 15 Nneɛma a Agya no wɔ nyinaa yɛ me dea.+ Ɛno nti na mekae sɛ obegye nea ɛyɛ me dea no bi na wapae mu aka akyerɛ mo no. 16 Aka kakraa bi na munhu me bio,+ na aka kakraa bi nso mubehu me.” 17 Ɛnna n’asuafo no mu bi bisaa wɔn ho wɔn ho sɛ: “Asɛm a ɔreka kyerɛ yɛn yi kyerɛ dɛn, ‘Aka kakraa bi na munhu me bio, nanso aka kakraa bi mobɛsan ahu me,’ ɛne sɛ, ‘efisɛ merekɔ Agya no nkyɛn’?” 18 Na wɔkae sɛ: “‘Aka kakraa bi’ a ɔreka no kyerɛ dɛn? Yennim nea ɔreka ho asɛm.” 19 Ná Yesu nim+ sɛ wɔpɛ sɛ wobisa no, enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Asɛm a mekae sɛ, aka kakraa bi na munhu me bio, nanso aka kakraa bi mobɛsan ahu me nti na morebisabisa mo ho nsɛm yi? 20 Nokware, nokware, mise mo sɛ, mubesu abɔ bena, nanso wiase bedi ahurusi; mubedi awerɛhow,+ nanso mo awerɛhow no bɛdan anigye.+ 21 Ɔbea, sɛ n’awo du a, odi awerɛhow, efisɛ ne dɔn adu;+ nanso sɛ onya wo akokoaa no a, ɔnkae ahohia no bio esiane anigye a wanya sɛ wawo onipa aba wiase nti. 22 Mo nso, seesei moredi awerɛhow; nanso mehu mo bio ama mo koma adi ahurusi,+ na obiara ntumi nnye mo anigye no mfi mo nsam. 23 Na saa da+ no moremmisa me asɛm biara. Nokware, nokware, mise mo sɛ, biribiara+ a mubebisa Agya no ɔde bɛma mo wɔ me din mu.+ 24 Ebesi sesɛɛ mummisaa ade biako mpo wɔ me din mu. Mummisa na mo nsa bɛka, na mo anigye ayɛ mã.+ 25 “Menam ntotoho+ so na aka nsɛm yi akyerɛ mo. Ɛdɔn no reba a merenkasa nkyerɛ mo ntotoho so bio, na mmom mɛka Agya no ho asɛm akyerɛ mo pefee. 26 Saa da no mubebisa wɔ me din mu, nanso ɛnyɛ nea mereka ne sɛ mɛsrɛ Agya no ama mo. 27 Na Agya no ankasa pɛ mo asɛm, efisɛ mopɛ m’asɛm+ na moagye adi sɛ mebae sɛ Agya no nanmusini.+ 28 Mifi Agya no nkyɛn na mebaa wiase. Bio nso merefi wiase akɔ Agya no nkyɛn.”+ 29 N’asuafo no kae sɛ: “Hwɛ! Afei worekasa pefee, ɛnyɛ ntotoho so. 30 Afei yɛahu sɛ wunim biribiara+ na enhia wo sɛ obi bisa wo.+ Eyi nti yegye di sɛ wufi Onyankopɔn nkyɛn na wobae.”+ 31 Yesu buaa wɔn sɛ: “Mugye di seesei? 32 Hwɛ, dɔn no reba, na nokwasɛm ni, adu sɛ mobɛhwete ama obiara akɔ ne fie+ na moagyaw me nkutoo; nanso ɛnkaa me nkutoo, efisɛ Agya no ka me ho.+ 33 Maka eyinom akyerɛ mo na monam me so anya asomdwoe.+ Mo ho rehiahia mo wiase de, nanso momma mo bo ntɔ mo yam! Madi wiase so nkonim.”+